“Ha Laga Daayo Xag-xagashadda Maayarka Iyo Ku Xigeenka Caasimadda Oo Ha Lagu Gacansiiyo” | Somaliland Today
← Wasiirka Gashaandhiga Somaliland Oo Ka Hadlay Boqorka Ku Soo Wajahan Deegaanka Badhan.
Dhibaatooyin saameeyay dhallinta wakhtigan →
“Ha Laga Daayo Xag-xagashadda Maayarka Iyo Ku Xigeenka Caasimadda Oo Ha Lagu Gacansiiyo”
Chief Caaqil Cabdiraxmaan Xuseen Xasan [Afey] oo ka mid ah Cuqaasha reer Somaliland, ayaa baaq isagu jira talo iyo hadal waayeelnimo ah u diray xubnaha Golaha Deegaanka Caasimadda Somaliland ee Hargeysa ee uu ka dhex-taagan yahay muranka la xidhiidha xil ka xayuubinta ay ku waddan Xildhibaanaddu Maayarka iyo ku xigeenkiisa. Caaqilku,
waxaa uu sidan ku sheegay Shir-jaraa’id oo uu galabta ku qabta magaaladda Hargeysa, kaasoo uu sheegay inuu talo waayeelnimo iyo dar-daaran isugu jirta uu dirayo xubnaha Golaha Deegaanka ee Caasimadda Hargeysa. Isagoo sheegay in aan loo baahnayn xiligan in la rido Maayarka iyo ku xigeenkiisa oo uu ku tilmaamay inay u adeegayaan bulshaddii soo dooratay. Waxaanu u soo jeediyey xubnaha Xildhibaanadda ah ee ku hawlan inay xilka ka tuuraan labaddan masuul inay ka waantoobaan ficilka khaldan ee ay waddaan, kuna badelaan taageeridda horumarka iyo u adeegista ummaddii soo dooratay ee caddceedda iyo dabaysha u taagnay markii ay codkoodda ku soo dooranayeen. Caaqil Cabdiraxmaan Afey,
isagoo arimahaas ka hadlaya waxa uu yidhi “Ha laga daayo xag-xagashadda Maayarka Caasimadda iyo ku xigeenkiisa oo halagu gacansiiyo wixii horumar ah ee ay ka waddan Caasimadda wixii toosin ahi yey noqon waanu idin rideynaa, waxaan qaba in horumarku ku jiro inay joogaan [Maayarka iyo ku xigeenka]. Iyagana waxaan odhan lahaa qaata wixii tallo ah ee danta caasimaddu ku jirto, taasoo ah wixii la idiin soo doortay. Xildhibanadda idiin doortay ee ku wadda jirtaan Golaha deegaanka ka qaata wixii fikir ah ee wax saxaya, wixii qalad ah-na si talo-wadaag ah ugu qanciya” Caaqil Afey, Isagoo hadalkiisa sii wata waxaa uu Maayarka iyo xigeenkiisa u soo jeediyey inay ka shaqeeyaan midaynta Golaha Deegaanka oo xusay Caaqilku inay muraayad u tahay sharefta caasimadda iyo kan Xildhibaanimadooda-ba. Sidoo kale Xildhibaanadda looga baahan yahay inay ku taageeraan horumarka Maayarka iyo ku xigeenka. Waxaanu yidhi
“Ugu danbayntii waxaan idin soo jeedinayaa ku midooba danta guud ee Caasimadda. Waxaan ku soo gunanadayaa, hadalkayga waanadda iyo wax u sheega ah oo leeyahay Maayarka iyo ku xigeenkiisu-ba waa inay ka shaqeeyaan midaynta Golaha deegaanka. Taasaa murayadda Caasimadda sharef u ah, idinkana Madax-nimadiina sharef u ah kuna hawlgal”.